2008: Unyaka weMicro | Martech Zone
2008: Unyaka weMicro
NgoLwesithathu, uDisemba 26, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lo bekungunyaka othokozisayo kubuchwepheshe obuku-inthanethi. Uma ubheka kusuka ekubukeni kwezinyawo okungu-10,000, abantu basavutha umkhondo wokuthi ungayisebenzisa kanjani le ndlela entsha, i-Intanethi. Mhlawumbe kusobala kepha ngikholwa wukuthi unyaka ka-2008 ngunyaka okwenziwa ngawo izinhlelo namasu Micro.
Ukuvela kwewebhu yezenhlalo (i-Web 2.0) manje sekuhamba ngokushesha kuya endaweni entsha, ekhonjiwe. Isixazululo esikhulu, esisodwa-sonke sizobe sithuthuka ukukunikeza ukuxhumana okulungile kubantu abalungile nokuqukethwe okulungile… ngesikhathi esifanele.
I-imeyili idlule ekusetshenzisweni okujwayelekile kwe-eNewsletters futhi ithola umfutho emhlabeni wokuthengiselana. Esikhundleni sokunikeza 'umcimbi' wakho i-imeyili ethunyelwayo manje isuswe njengengxenye yecebo lokumaketha lilonke lokugcina abasebenzisi nokugcina bexhunywe esitolo sabo sokuthengisa, inethiwekhi yabo yezenhlalo, amabhulogi abawafundayo, njll.
I-imeyili nayo iyavela, yize kunemikhawulo ye- amaklayenti amakhulu we-imeyili. I-imeyili iyahamba emincane… imiyalezo efike ngesikhathi, ukulawula okuningi, nokuqhutshwa komcimbi okwengeziwe.
Ukubhuloga kuye kwahamba nge-Micro nge Twitter, UJaiku noPownce. Amazwibela asheshayo enza izingxoxo ezibonakalayo kusuka kokunye kuye kokuningi.
Izinkampani sezivele ziqala ukusebenzisa iMicroblogging, kepha sizobona ukusetshenziswa kokuthengisa kweMicroblogging ngonyaka ka-2008. Sizophinde sibone amaqembu asetshenziswe kangcono ekubhuleni iMicro-… njengamagumbi okuxoxa aguquke ezinhlelweni zokuxoxa zomphakathi eminyakeni eyishumi eyedlule.
Ama-Social Networks asuka kude namasu we-monolithic we Facebook, MySpace, LinkedIn futhi Plaxo… Bese uthuthela kumanethiwekhi omphakathi amancane we Ning (inothi: SmallerIndiana, AmaNavyVets, Ezokumaketha Ezemidlalo 2.0, I-IndyLance zimbalwa engiziqalile noma engibandakanyekile kuzo!)
Amasayithi okubekisa amabhukhimakhi afana ne- Digg ziyashiywa kumasayithi afana ne- I-Mixx - lapho ungasetha khona ama-Micro Groups ukujoyina. Ngingakhuthaza wonke umuntu ofunda ibhulogi yami ukuthi angithinte ukuze athole isimemo seQembu Lokumaketha Eliku-inthanethi ukuze sabelane ngezixhumanisi. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezinjengeTruemors zizoqhubeka nokuvela ngamakhono wokukhomba acwengekile kunemikhakha ekhethwe ngaphambilini.
Izinhlelo zeGeographic Information Systems ezikwi-inthanethi ziyasetshenziswa ngokuya ngokuya ngokuhamba kwesikhathi. -Google, Yahoo, Futhi Microsoft qhubeka nokwenza ngcono idatha yesifunda ngokusesha okuthuthukile kwe-Geographic. I-Google iyasekela I-KML kumamephu esayithi, ukukhomba ngokwendawo nokukhomba amawebhusayithi wakho!
Ividiyo iyahamba iMicro (okuthunyelwe kubuyekezwe ngezincomo ezivela emazwaneni kaNil eScobleizer). Utterz, Okuthulile futhi I-QIK. Ubuchwepheshe bevidiyo nomakhalekhukhwini buyahlangana, kunika abantu amandla okurekhoda nokulayisha ividiyo kalula kakhulu ngekhwalithi engcono!
Isoftware njengezicelo zezinsizakalo zizoqhubeka nokucindezelwa ukuthi ziguquguquke ngokwanele ukuze zifakwe uphawu futhi zihlanganiswe nezinye izinhlelo noma ezinye izinhlobo. Uhlelo lokusebenza 'olusemathinini' alusasebenzi ngokwanele ukuthi sikwazi ukuthenga nokubeka, kumele sisebenzise ubuchwepheshe beCSS ukuguqula izinhlelo zethu zisebenze kunoma iyiphi imvelo. Kumele sakhe izinhlelo zokusebenza ezikwazi ukuguqulwa ngemininingwane emincane kakhulu (emincane).
Lapho unakho, ukubikezela kwami ​​kwe-2008 - unyaka wecebo elincane kanye nesicelo sebhizinisi elincane. Amandla wokwakha like amaqembu, izinhlelo ezisebenza ngokwendawo, ama-SaaS anamagama amancane, noma amaqembu omphakathi alula azokhishwa ngokuphelele ngonyaka ka-2008. Labo abangazivumelanisi nezimo bazokhohlwa.
Tags: 2008ukumakethaizinhlelo zokwaziswa kwendawogisamabalazweUkukhangisa kwe-2008mikesocial mediaamanethiwekhi omphakathiisoftware njengensizakalo
Dec 27, 2007 ku-2: 47 AM
Iqembu lakho leMixx alivulekele ababhalisile bakho. Ngichofoze isixhumanisi sakho ukujoyina futhi ngathola lo mlayezo:
“Hawu! Kukhona okushaya amanzi.
I-Pssst: Awukamenywa kuleli qembu okwamanje, ngakho-ke cha, awukwazi ukukwenza lokho. Kodwa buza kahle mhlawumbe bazokungenisa. Noma vele uqale elakho iqembu! ”
Dec 27, 2007 ku-9: 35 AM
Ngeshwa, iMixx ayinikeli 'ngamaqembu avulekile' (ngokwazi kwami!). Uma ungathanda, sebenzisa ifomu lami lokuxhumana bese ungithumela ikheli lakho le-imeyili futhi ngizokuphonsa isimemo!
Dec 27, 2007 ku-5: 49 AM
Kuzwakala ngathi 'ama-mediasnacks' nxazonke 😉
Dec 27, 2007 ku-10: 33 AM
Uma yonke into ihamba kancane, futhi kufanele ngivume ukuthi okushoyo kuyiqiniso ngakho-ke njengabantu ngabanye sizoba yingxenye yezingxoxo ezincane, njengokuthi uma usephathini elikhulu futhi ukhuluma nabantu aba-5 noma abayi-10 ubusuku bonke.
Ekugcineni sizodinga indlela enhle yokuthola ngalamaqembu njengabo bonke abantu ngandlela thile abathola nge-Facebook kulo nyaka.
Enye yezinkinga zangempela engizibonile futhi ngazama ukuhambisana nazo kulo nyaka kube yizinguquko ezinkulu nokuthi bekunzima kangakanani ukuhambisana nakho. Ngithole ukuthi ngifunda ngobuchwepheshe obusha kubantu abanjengoScoble ngokufunda ama-RSS feed kumfundi wami we-Google kepha kulula kakhulu ukuthi ubuchwepheshe obukhulu bungaphuthelwa ngaphandle kokuthi omunye ngaphandle kwe-Arrington asisize sihambisane nalokho okufanele sikubuke.
Dec 27, 2007 ngo-12: 52 PM
Sawubona, ngiyabonga ndoda ngokushiwo. Bengingafuni neze ukwehlisa inani leposi lakho owaziyo. Uqinisile emalini ngokwami. Mhlawumbe into ehloniphekile bekungaba ukuphawula lapha kuqala, yize lokho bekuzoba "ukungena ngaphakathi" mhlawumbe. Ngangijabule ukufunda okuthunyelwe kwakho noma kunjalo. Jabulela.
Dec 27, 2007 ngo-2: 52 PM
Azikho izinkinga, Nil! Uveze iphuzu elihle. Ngibabaze kwividiyo ngaze ngafunda ukuphawula kwakho - futhi ubuqinisile!
Dec 27, 2007 ngo-3: 46 PM
Enye yezinto ebihlale ingikhanga kwezobuchwepheshe nakwimidiya emisha yikhono lokuhlanganisa izinto nokwenza izinto ezintsha, ezithokozisayo (Uxolo, angikwazi ukucabanga ngegama elingcono kunalokho njengamanje.) Kepha okuningi kwalokhu Izinto ziba yisikhangiso kuze kube seqophelweni lokuthi bambalwa kuphela abakhanyiselwe abaziyo ngobukhona bayo. Ngicabanga kakhulu ngezinto ezinjengama-hashtag ku-Twitter. Ukuze konke lokhu kuhamba kancane kube nomthelela, kudingeka ukuthi kube nohlobo oluthile lwento yomuthi wefoni yokusabalalisa izindaba kubantu abavamile ngoba - ake sibhekane nakho - bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi i-RSS iyini, ingasaphathwa eyokubhalisela kukho konke okuphakelayo okubalulekile bese ukusefa kukho konke.
Ekugcineni, engikubangayo ukuthi amathuba amaningi wokumaketha abantu abawabona kuma-microblogging nakuma-mobile media nakho konke okunye yizinhlobo zezinto abantu abanjengami abazozikhalela kuzo. Angiphikisani nombono ngamunye kepha kufanele - futhi kuyadingeka - kube izindlela ezicacile, ezilula zokuphatha nokulawula ukuthi lolo lwazi lunjani kimi. Ngicabanga ukuthi iphrojekthi efana ne-OAuth ne-OpenID ihamba ibanga elide ekwenzeni lula lolu hlobo lwento kepha ngicabanga ukuthi usemningi umsebenzi okumele wenziwe ukuvikela abantu. Njengoba umhlaba uhamba kancane, isikhala abahlaseli abasingenisayo siba ngesomuntu uqobo. Futhi angikuthathi kabi ngomusa ukuthi indawo yami yangasese ihlaselwe. Uma ngikumemela ngaphakathi, kulungile. Kodwa-ke uma ngicela ukuthi uhambe, phuma ngaphandle noma ngizokukhipha.
Lokho nje kungu- $ .02 wami.
Dec 27, 2007 ngo-5: 14 PM
Okungenani inani le-nickel, uJamie 😉
Ngicabanga ukuthi ubethele izinto ezimbili… okokuqala ukuthi ubuchwepheshe buyavela futhi nokuziphendukela kwemvelo kuyinto enhle. Iphuzu lesibili olenzayo yikho kanye ukuthi kungani sidinga abanemimoya abaningi abenziwe kahle. Uma nginomkhiqizo noma insizakalo ongahle ube nentshisekelo kuyo, ungakujabulela ukuthola ngakho (ngamagama akho) njengoba ungimemile.
Ukuthola ubuchwepheshe obuletha umkhiqizo noma insizakalo kulokho okufunayo noma izidingo lowo mkhiqizo noma insizakalo yilokho esikulandelayo. Into yokugcina engifuna ukuyenza a) ukuchitha imali yami ekukhangiseni okungafinyeleli kumuntu ofanele futhi b) ukuthukuthela abantu abanjengawe ngokukubeka ebusweni lapho ungazange uyicele.
Ngijabule ngokuvela kobuchwepheshe obuzoqhubeka nokuletha imakethe ndawonye! Ngiyethemba asicasuki abantu abanjengawe ngenkathi sikuthola. 🙂
Dec 28, 2007 ku-2: 43 AM
Ngalo lonke ulwazi olutholakala kuwebhu, kuzofanele ukuthi sikuhlunge ukuze sikwazi ukuluqonda. Enye yezindlela ezinhle zokuhlunga ukwenza i-niche noma ngamanye amagama ukwakha umphakathi omncane noma inguqulo yolwazi. Ngivumelana ngokuphelele nezibikezelo zakho.
Dec 31, 2007 ku-5: 11 AM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe. Ngiyavuma ukuthi iMicro inamandla. Kungani? Ngoba kulula ukukwenza. Abantu abalindeli ukuthi ubhale indaba ephezulu enesiqalo esihle, esiphakathi nesiphetho. Futhi kulula ukukudla, okungcono: 'phequlula'. Jabulela.
Feb 7, 2008 ngo-7: 36 AM
Bengizibuza ukuthi ngabe ukhona yini umuntu ongangisiza. Ngifuna udaba / izindaba ezinkulu zamanje kwezokumaketha ezihlobene nobuchwepheshe… noma iziphi iziphakamiso zizokwaziswa kakhulu… cheers !!!